गुगल पिक्सेल GCam को पहिले नै ग्यालक्सी s9 का कार्यात्मक पोर्ट छ Androidsis
कार्यरत GCam पोर्ट को लागी महिनौं को लागी प्रतिक्षा गरे पछि, एक XDA विकासकर्ताले हामीलाई ल्याउन को लागी सक्षम छ अनुप्रयोग जसले पोर्टेट मोड र HDR + मा पहुँच अनुमति दिन्छ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 को लागी।
Google पिक्सेल GCam को एक कार्यात्मक पोर्ट भएको पनि अनुमति दिन्छ ग्यालक्सी S9 को पहिले नै महान तस्वीर सुधार गर्नुहोस्। त्यो बाहेक पोर्ट्रेट मोडले ग्यालक्सी एस's को आफ्नै क्यामेराको छनौट केन्द्रित गर्न एक हजार मोड दिन्छ।
1 केहि थाहा पाउन
2 ग्यालेक्सी S9 को लागी GCam डाउनलोड र कन्फिगर कसरी गर्ने
केहि थाहा पाउन
भन्नुहोस् कि पोर्ट्रेट मोड केवल रियर क्यामेरामा काम गर्दछ। ग्यालक्सी एस in मा मोर्चामा यसलाई लिन हामीलाई थोरै समय चाहिन्छ, र विकासकर्ता (IDan9) जब सम्म ग्यालेक्सी S1109 को लागि GCam पछाडि यो तल झर्दछ। पछि वर्णन गरिए अनुसार, फ्रन्ट क्यामेरामा पोर्ट्रेट मोड काम गर्न एक विशिष्ट RAW ढाँचा आवश्यक छ र त्यो ग्यालक्सी S9 मा उपस्थित छैन (वा केवल सैमसंगले यसलाई असक्षम गरेको छ)।
La IDan1109 द्वारा GCam यसले एक्सीनोस चिपको साथ ग्यालक्सी एस on मा काम गर्दछ, जबकि स्न्यापड्रैगन संस्करण अर्को हुनुपर्दछ जुन हामी तपाईंलाई अहिले लिंक दिन्छौं। हामी गुगल पिक्सल क्यामेराले निर्मित पोर्टको सुविधाहरूको सूची पनि छोडछौं। यी हुन्:
पोर्ट्रेट मोड र HDR + 2017 यसले पछाडिको क्यामेरामा काम गर्दछ।
यो हुन सक्छ सक्रिय एपर्चर २.2.4 जुन दिनको फोटोमा अधिक स्पष्टता प्रदान गर्दछ (कम प्रकाशमा तपाईंले यो विकल्प निष्क्रिय गर्नुपर्दछ)।
यो हुन सक्छ विकल्प पिक्सेल २०१ 2017 + नेक्सस activ सक्रिय गर्नुहोस् फोटोहरूको गुणस्तरमा सुधारको लागि मोडलमा।
La तस्विरको गुणस्तरमा फरक देखिने भन्दा बढी छ सामसु camera क्यामेरा अनुप्रयोग (जुन हामी कहिले पनि हटाउदैनौं) र गुगल क्यामेरा अनुप्रयोगको लागि आईडियन संस्करण बीच। तार्किक रूपमा यो पूर्ण कार्यात्मक संस्करण होईन, तर केहि हप्ता अघि भएको तुलनामा यो सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस owners को मालिकहरूको लागि ठूलो खुशीको खबर हो।
ग्यालेक्सी S9 को लागी GCam डाउनलोड र कन्फिगर कसरी गर्ने
अब हामी चाखलाग्दो चीजमा पुगेका छौं। पहिलो ग्यालक्सी S9 को दुबै संस्करणका लागि लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् Exynos यूरोपमा छ र बाँकी स्नैपड्रैगनमा।
तिनीहरू धेरै मूल्यवान छन् S9 + को रूपमा ग्यालक्सी S9 को लागी.
GCam को पछिल्लो संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्: ग्यालक्सी S9 Exynos को लागी.
GCam को नयाँ संस्करण: ग्यालक्सी S9 स्नैपड्रैगन को लागी.
अबको लागि GCam पोर्ट को सक्दो फाइदा लिनुहोस् ग्यालक्सी S9 Exynos को लागी, तपाईले यी चरणहरु मध्ये प्रत्येक पालना गर्नु पर्छ:
मा "अन्तिम JPG गुणवत्ता HDR+ »हामी १००% चयन गर्दछौं।
हामी खोल्नका लागि २.2.4fs मा स्विच सक्रिय गर्दछौं। यसलाई निष्क्रिय गर्न नबिर्सनुहोस् यदि तपाई कम प्रकाशमा फोटो लिन लाग्नु भएको छ, किनकि आईएसओ उफ्रिनेछ र फोटो धेरै हल्लाको साथ बाहिर आउँनेछ।
यसका लागी ग्यालक्सी S9 स्नैपड्रैगन यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
मोडेल: पिक्सेल 2XL.
JPEG गुण: १००%।
"२०१ 2016 पिक्सेल ZSL का लागि टगल" विकल्प सक्रिय गर्नुहोस्।
तपाईं मेमोरीबाट अनुप्रयोग बन्द र परिवर्तनहरू सक्रिय गर्न खोल्न।
तपाईं सोध्नु हुनेछ हामी किन Nexus6मोडेल प्रयोग गर्दछौं, र यो केवल किनभने यो एक हो कि GCam पोर्ट मा सबै भन्दा राम्रो गुणवत्ता फोटोग्राफी दिन्छ। हामी हेर्नेछौं कि निकट भविष्यमा विकासकर्ताले यस पक्षलाई सुधार गर्न सक्दछ, तर अहिलेका लागि यो के हो।
अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा। हो यसले तपाईंलाई त्रुटि दिन्छ जुन क्यामेरा बन्द हुन्छतपाईं सेटिंग्स> अनुप्रयोगहरू> गुगल क्यामेरा> भण्डारण जानु पर्छ र क्यास र डाटा दुबै खाली गर्नुहोस्। नयाँ संस्करण जाँच गर्न सम्झनुहोस् XDA मा यस थ्रेडमा.
भनिएको छ कि सबै सक्रिय पछि, तपाईले शीर्ष मा HDR + सक्रिय प्रतिमा थिच्नु पर्छ ताकि सबै फोटोहरु कि मोड संग आउन। यो संग तपाईं हुनेछ तपाईको ग्यालक्सी S9 का साथ लिनका लागि सबै भन्दा राम्रो फोटो र यसैले Google पिक्सेलको सब भन्दा राम्रोसँग यसको सफ्टवेयर फोटोग्राफी, र सामसु phone फोनको लेन्सको रूपमा छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S9 को लागि Google पिक्सेल GCam को अन्तिम कार्यात्मक पोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्
यो अनुप्रयोग (संस्करण) ले काम गर्दैन, यसले तपाईंलाई फ्रन्ट क्यामेराबाट फोटो लिन पनि दिदैन, यो डिसफंक्शनल हो र मसँग पहिले नै अर्को राम्रो थियो जुन कम्तिमा यसले मलाई अगाडि क्यामेराको साथ फोटो खिच्न अनुमति दियो।
Elabusamdres लाई जवाफ दिनुहोस्